RHA DACAMP, CL1 na CL750, ihe ngwọta RHA ọhụrụ | Androidsis
N'oge IFA ikpeazụ na Berlin, na nso nso a na AVME na Madrid, RHA ewetala akụkọ ya maka afọ 2016. Anyị na-ekwu maka ya DACAMP L1 yana ụdị ekwe ntị abụọ ọhụrụ ya RHA CL1 na RHA CL750. NAAnyị anwalela ụfọdụ ihe ngwọta nke ndị nrụpụta, dị ka ekweisi ha mara mma Ọnụ ego RHA T10 y RHA T20, Ugbu a, anyị na-ewetara gị mmetụta mbụ mgbe ịnwale akwụkwọ akụkọ atọ na-atọ ụtọ nke onye nrụpụta dabere na Glasgow.
Aga m amalite site n’ikwu banyere DACAMP L1, DAC na ihe nkwalite maka mkpanaka Nke ahụ mere ka m meghee ọnụ m ka m mechara ya. Dị ka ị ga-ahụ mgbe e mesịrị, ọ bụ nnọọ premium ngwaahịa iji ezi music hụrụ n'anya, ma na ya pụta bụ ruo na-atụ anya.
1 DACAMP L1, ngwaọrụ mara mma nke ukwuu yana ike
2 Jiri ekweisi RHA CL1 nwalee DACAMP L750
2.1 Atụmatụ DACAMP L1
3 RHA CL1 na RHA CL750
3.1 Njirimara teknụzụ RHA CL1
3.2 Njirimara teknụzụ RHA CL750
4 RHA DACAMP, RHA CL1 na RHA CL750 Image Gallery
DACAMP L1, ngwaọrụ mara mma nke ukwuu yana ike
Mgbe ị were ihe ngwọta RHA ọhụrụ maka oge mbụ, ị nọ maka ihe ijuanya. ya ahụ nke aluminom na-enye DACAMP L1 ezigbo aka. Anyị amaghị kpọmkwem ibu ahụ, ma ọ naghị enye m aka.
El DAC na-enye ezigbo njide na nnukwu mmetụta nke ịdịte aka. Anyị nwere ike ibuli ma wetuo olu site na wiil nke na-enye mmetụ ike siri ike nke ukwuu. Na mgbakwunye, njikwa iji chịkwaa bass, treble na uru na-enye ụzọ karịa nke ziri ezi.
RHA na-apụtakarị maka ya àgwà nke ngwaahịa ya niileNa enweghị mgbagwoju anya, DACAMP L1 na-enye anya na mmetụta nke na-eme ka atụmanya na ngwaahịa ụlọ ọrụ.
Jiri ekweisi RHA CL1 nwalee DACAMP L750
Ọ dị mma, anyị ahụlarị na RHA ọhụrụ ekwentị mkpanaka DAC dị ịtụnanya, mana kedu ka ọ dị? Àgwà ya ma a bịa n'ịkpọ ọdịyo dị nnọọ mma. Mụ onwe m na-eji ekweisi RHA T20 Black Edition, kacha mma m nwara n'ihe gbasara ọdịyo, mana Ngwakọta DACAMP yana ekweisi CL1 na-eme ka ahụmịhe dị egwu karịsịa karịa ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ Britain ugbu a.
Mana tupu m agwa gị gbasara ahụmịhe nke m na DACAMP L1, a na m ahapụrụ gị njirimara teknụzụ nke DAC dị ike ya na amplifier.
Atụmatụ DACAMP L1
DUAL ESS ES9018K2M DACs & sistemu klaasị nwere AB amplifiers
Nkwado maka ọdịyo mkpebi dị elu nwere usoro ruru 32-bit / 384kHz PCM na 5.6MHz DSD
Nsonaazụ ekweisi:: 4-pin Mini XLR (nke ziri ezi), 3.5mm
Ntinye dijitalụ: USB A, USB B Micro, Obere TOSLINK (optical)
Ndakọrịta: Kọmputa mkpanaaka na desktọpụ nwere Android, PC, Mac, iOS Sistemu arụ ọrụ (MFi gbaara ama)
Batrị li-ion 4000mAh nwere ikike nke ruru awa 10 nwere ọrụ powerbank
Ọkwa atọ nke uru yana njikwa EQ maka bass na treble.
Dị ka ị hụrụ, o nwere a ngwaike na-akpali n'ezie. Ihe mbụ m na-eme bụ iji ekweisi RHA T20i m nwalee ya. Ihe mbụ m na-eme bụ jikọọ ekweisi na DACAMP L1 site na ọdụ ụgbọ mmiri 3.5 mm na n'aka nke ọzọ ekwentị m. M na-agbalị n'ihi na ekwentị m nwere mmepụta Ụdị-C. Nsogbu mbụ. Luckily Jakub Dziewiecki, RHA Account Executive, nwere ya niile zubere ma na-enye m a Ụdị-C ka micro USB nkwụnye. Ọ na-agba ọsọ nke ọma. Ọ dị mma, ka anyị malite ige egwu.
Nke a na-abịa nsogbu nke abụọ, I Enwere m egwu niile na Spotify Ya mere, ọ bụ ezie na m na-ebelata ndepụta ndị ahụ na mma kachasị mma, ejighị m n'aka na m ga-achọpụta ọdịiche ahụ. Achọrọ m ijide n'aka na m gbara ya ka m kpebie ibu ụzọ nwaa egwu ole na ole m na-egekarị, yabụ m ga-achọpụta ihe dị iche mgbe iji DACAMP L1 na-ege ya ntị. Nke mbụ bụ egwu rap, m na-akpọ egwu ahụ ka m na-edozi usoro bass na treble site na nhazi nhazi. Ọ bụ nke m ka ọ bụ enwere ndetu m na-aghọtabughị? Ụda ahụ na-ada nke ọma karị, mana ahụghị m nnukwu ọdịiche. Ruo mgbe Jakub na-enye m ekweisi RHA CL1 ọhụrụ.
Ụda ahụ na-akawanye mma, ogo ọdịyo dị ịrịba ama ma amalitere m ịghọta nuances egwu m na-anụbeghị mbụ. Nke a dị ezigbo mma. Ana m anwale ọtụtụ egwu na ịmụmụ ọnụ ọchị site na ntị ruo na ntị ka ngwaahịa anaghịzi abanye na anya, mana DACAMP L1 na-enye arụmọrụ dị mma. Achọrọ m karịa. M leliri anya wee hụ Jakub n'akụkụ Marina Schurer jiri ọnụ ọchị mara. Ha maara àgwà ngwaahịa ha na ha achọghị imeju m afọ ka ha hapụ m ka m gwuo obere oge tupu ha enye gị ohere ige ntị na egwu John Williams kacha mma site na onye ọkpụkpọ nwere egwu dị elu. Etinyere m ekweisi RHA CL1 wee kpọọ ụda ụda Star Wars. N'ebe a, anyị na-ekwu okwu banyere ọkwa ọzọ. Ọ bụrụ na Spotify achọpụtala m ọganihu, ị pụghị ichetụ n'echiche ihe ijuanya m nwetara mgbe m nwara egwu dị elu na DACAMP L1 na isi ekweisi ya. Ụda ahụ dabara nke ọma, na-enye ọdịyo zuru oke, enweghị nkebi. Ezi egwu na nti. N'ezie.
Mgbe ijiri ekweisi dị elu jikọtara na ama ama m wee zụta na nsonaazụ enwetara na DACAMP L1, enwere m ike ime ka obi sie gị ike na ọdịiche ahụ pụtara. DAC a nwere ike ibugharị abụghị ngwaahịa dị ọnụ ala, ọ ga-efu euro 549 mgbe ọ rutere n'ahịa, ma aghọtara m na a na-akwụ ụgwọ àgwà ahụ. Aghọtara m nke ọma mgbe m nwalechara ha nwa oge. Nkwubi okwu m na nke a, na enweghị ike ịme nyocha zuru oke nke ngwaahịa RHA ọhụrụ, bụ na.e ọrụ ndị otu RHA rụrụ adịla mma Ma, ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ egwu n'anya, nke a bụ ngwa nke ị gaghị atụfu ya. Na mgbakwunye, yana DACAMP L1 enwere igwe na-agbanwe agbanwe iji sonyere ama na DAC enwere ike, yabụ na ọ ga-adị mma iburu ya ebe ọ bụla.
RHA CL1 na RHA CL750
Ahụmahụ ahụ dị na DACAMP L1 dị egwu. Agbalịrị m ya na ma RHA CL1 na RHA CL750 na ahụla m na àgwà ahụ dị elu, karịsịa na-akọwapụta CL1. Agaghị m agwa gị banyere ọdịiche dị na àgwà ọdịyo dị n'etiti otu ihe nlereanya na nke ọzọ n'ihi na nke a ọ dị m mkpa ka m rụọ usoro nke ule na na ngosi ọ bụghị ebe kacha mma, ma ịmara ihe ngwọta RHA ndị ọzọ m maara maka. eziokwu na ha ga-ahapụ m nnukwu uto n'ọnụ.
Njirimara teknụzụ RHA CL1
Ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere mkpebi siri ike nwere seramiiki CL Dynamic ọkwọ ụgbọ ala
Shei seramiiki kpụrụ ZrO2 na-enye ogo ọdịyo dị elu
Cable nwere usoro omenala (sMMCX)
Ag4x silver-core cable (4-pin Mini XLR) na OFC USB (3.5mm / 6.25mm) (ha abụọ gụnyere)
Nkwado ntị na-agbanwe agbanwe
11 ụzọ abụọ nke silicone earplugs, na-ebu akpa na ngwa nhicha
Nhazi nke ekweisi na-echetara m RHA T20 m, ọ bụ ezie na na a nnọọ ọchịchọ ịmata nkọwa: ha bụ kpamkpam mbughari. Ihe kpatara ya? Tinyere RHA CL1 na-abịa eriri abụọ nwere njikọ dị iche iche, njikọ MINI XLR 4-pin zuru oke na DACAMP L1 na eriri ọzọ nwere njikọ 3.5 mm nkịtị nke anyị nwere ike iji ma na DACAMP L1 na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ. .
O juru m anya na ahụ ekweisi, nke ejiri seramiiki mee. Mmetụ ahụ dị ezigbo ụtọ na, ọ bụ ezie na enwere m nchegbu maka adịghị ike ha, eziokwu bụ na mgbe ha metụrụ ha aka, ha yiri ka ha na-enye nnukwu nguzogide. M na-agbalị ịkwasa ekweisi n'otu eriri iji tinye ya na nke ọzọ, ahụrụ m na usoro ahụ dị nnọọ mfe. na enwere ike ime ya n'enweghị nsogbu. Ọ masịrị m eziokwu ahụ, n'adịghị ka ekweisi ndị ọzọ dị elu, RHA CL1 enweghị isi dị iche iche dabere na ụdị egwu anyị chọrọ ịnụ ụtọ. Nke ahụ bụ ihe nha nha DACAMP L1 bụ maka. Igwe ikuku oxygen na-enweghị oxygen nke RHA CL1 na-enye mmetụta dị ukwuu nke ịdịte aka na ọ siri ike ịgbakọta, ya mere o doro anya na, dị ka ọ dị na mbụ na ụlọ ọrụ ahụ, imewe ahụ dị mma ma kpachapụ anya. ga-akụ ahịa na ọnụ ahịa euro 459.
Njirimara teknụzụ RHA CL750
Ultra-band CL Dynamic transducers
Okpu agha nke igwe anaghị agba nchara nwere Aerophonic ™ n imewe
Igwe na-enweghị ikuku oxygen nwere nsonaazụ 3.5mm ma ọ bụ 6.25mm
11 ụzọ abụọ nke silicone earplugs, na-ebu akpa
Na nke a anyị na-ahụ a ekweisi arụrụ nke ọma na-enye njiri mara nke ekweisi ekweisi dị elu nke RHA, na-echetara nke ọma RHA MA 750. N'adịghị ka CL1, na nke a, okpu agha bụ nke igwe anaghị agba nchara. Igwe ikuku oxygen na-adịghị adịkwa ngwa ngwa, nke m na-enwe ekele maka ya. Dị ka ọ dị na mbụ na onye nrụpụta, ekweisi a na-abịa 11 ụzọ abụọ nke silicone earplugs nke mere na, dabere n'ogo nke ntị anyị, anyị na-ahọrọ ngwọta kachasị mma, na mgbakwunye na ihe eji ebu.
Na-anwale ha nwa oge m na-aghọta na, n'agbanyeghị na-efu ihe fọrọ nke nta 100 euro obere, ihe dị iche tụnyere RHA T20i bụ nke ukwuu ngosi. Ngwaahịa na-atụ n'anya nke, na enweghị iji oge iji nwalee ya, na-enye ọdịyo na ọkwa nke ekweisi ntị kacha mma. Ọnụ ego ya? ga-aga ahịa n'ime ọnwa Ọktọba - Nọvemba na ọnụ ahịa euro 149.
Nnukwu ihe ijuanya na ngwọta RHA ọhụrụ, yana DACAMP L1 n'ihu, ahịrị ọhụrụ nke ngwaahịa adịchaghị mma nke na-egosi ihe kpatara RHA ji bụrụ otu n'ime akara ngosi na ahịa ekweisi ntị. Ọ bụrụ na ị nwere ohere, egbula oge ịnwale ekweisi RHA CL1 na DACAMP L1 n'ihi na ahụmịhe ahụ dị egwu.
RHA DACAMP, RHA CL1 na RHA CL750 Image Gallery
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA » RHA DACAMP L1, CL1 na CL750, onye nrụpụta ahụ juru anyị anya site n'igosi DAC mbụ na ampilifaya enwere ike ibugharị maka smartphones na ahịa
3 egwuregwu ohuru ohuru ohuru ugwo maka gam akporo
Vidio nke Bluboo Picasso 4G na-akwado njirimara ọrụ ya niile